OLEOYLETHANOLAMIDE (OEA) –TLAGHAG Anwansi nke Ndụ Gị
Mbido > Oleoylethanolamide (OEA) –Ihe Mmasị Na Ndụ Gị
Oleoylethanolamide (OEA) –Ihe Mmasị Na Ndụ Gị
Na ndị mmadụ na-esiwanyewanye mara uru nke Oleoylethanolamide (OEA), ina Oleoylethanolamide (OAS) Ihe mgbakwunye agbatịala nke ukwuu n'ahịa. Nke a emeela ka ụlọ ọrụ ndị na-emepụta ihe na-ese okwu n'etiti onwe ha iji mepụta ihe mgbakwunye dị elu iji jide òkè n'ahịa ahụ. Ọ bụrụ na ị bụ onye nrụpụta ahụike na-eme atụmatụ ịbanye na ahịa mgbakwunye Oleoylethanolamide (OEA), ị ga-ahụrịrị na ị na-enweta ntụ ntụ Oleoylethanolamide (OEA) kachasị elu. Gha ezigbo ihe bụ ihe mbụ ị ga - eme iji hụ na azụmaahịa ọ bụla na - aga nke ọma. Cofttek bụ ọkachamara Oleoylethanolamide (OEA) soplaya onye naanị na-ere gị ukwuu irè ngwaahịa na a ahịa ihe karịrị 10 afọ.
Gịnị bụ Oleoylethanolamide (OEA)?
Oleoylethanolamide nwere okwu atọ: oleoyl, ethanol na amide. Maka ọdịmma anyị, anyị na-ezo aka na OEA na nkenke. A makwaara ya dị ka oleothanolamine.
Ọ bụ eke ethanolamide lipid nke na-arụ ọrụ dịka onye nchịkwa gbasara usoro nri na ịdị arọ nke anụ ahụ na ụdị akụkụ ọ bụla. Ọ bụ metabolite acid oleic na kpụrụ na obere eriri afọ nke ahụ mmadụ. Ọ na-etinye aka na PPAR Alpha receptor nke na-enyere aka ịchịkwa ihe anọ: agụụ, abụba anụ ahụ, cholesterol, na ibu. PPAR Alpha pụtara Peroxism Proliferator-Ọrụ Ntugharị Alfa.
Ojiji nke Oleoylethanolamide (OEA)
OEA na-arụ ọrụ n'ụzọ dị oke mkpa. Nke mbu, o na - eme ka oghere di n’agbata otu nri rue nri ozo. Nke abuo, ọ na - enyere aka n'ibelata ngagharị nke circadian. Nke ato, ọ bụ ihe ndị na-edozi ahụ na-achịkwa ya.
Achọpụtara ọrụ ọrụ nke OEA na ihe ndị na-erite uru ya afọ iri ise gara aga. Enweghi nyocha zuru oke ma ahaziri ahazi banyere OEA tupu afọ 2001. Ọ bụ ndị nyocha si Spain bidoro ịmụ banyere OEA, nwalere na oke iji chọpụta nsonazụ ya. Ọmụmụ ihe ahụ kwuru na OEA enweghị mmetụta dị njọ na ụbụrụ mana ọ nwere ike ịgbanwe usoro iri nri ma nwee mmetụta na omume ịkpa agwa.
Usoro molekul bụ C2OH39NO2. Nọmba CAS pụrụ iche bụ 111-58-0. OEA bụ ọgwụ oleic acid na ethanolamine. Na ọnụnọ nke abụba bara ụba nke dị na akụkụ nke obere eriri afọ na ahụ anyị bụ ebe a na-eme usoro njikọ nke ihe abụọ a. OEA yiri nnọọ na endocannabinoid anandamide ma dịkwa mma karịa.
Dosdị oleoylethanolamide (oea)
Ọnụọgụ ọgwụ nke OEA enwere ike iwere ya n'ụzọ abụọ dabere na ndụmọdụ dọkịta:
OEA were na-enweghị ihe ọ bụla ọzọ ibu Mbelata emeju
Ọ bụrụ na ewere Capsule OEA na-enweghị mgbakwunye mgbakwunye mgbakwunye, ị nwere ike iri 1 OEA capsule nke 200mg.
OEA were mgbakwunye mbelata ọzọ
Ọ bụrụ na-ewere capsule OEA yana mgbakwunye mgbakwunye mbelata ọzọ, ị nwere ike ịnụ capsule 1 OEA nke 100 mg na 150 mg.
Mmadu aghaghari iri nri OEA nkeji iri ato tupu ha eri nri. Nke a ga - eme ka ị nwekwuo afọ ojuju mgbe ị na - eri nri ma si otú ahụ mechaa ị ga - eri obere nri.
Ọzọkwa, ị nwere ike ịbawanye ma ọ bụ belata ogo nke usoro ọgwụgwọ kwa ụbọchị nke OEA dabere na ịdị arọ nke ahụ gị. Ka e were ya, onye na-atụle 150 lb na-ewere capsule OEA nke 100mg. Mana oburu na mmadu turu 250 lb, o nwere ike iwere okpu OEA nke 180 mg.
Zụta Oleoylethanolamide (OEA) ntụ ntụ na nnukwu
Nwere ike itinye iwu ntanetị maka nzụta nnukwu ntụ ntụ ma ọ bụ nwee ike ịzụta site na ụlọ ahịa ndị ama ama. Nchekwa dị mfe na nke OEA ntụ ntụ. Kwesịrị ịchekwa ya na okpomọkụ ụlọ. Ma, ọ gaghị abịa na kọntaktị na mmiri ma ọ bụ kpọmkwem ụzarị anyanwụ. Yabụ, ịkwesịrị idobe ya nke ọma n'ime ebe dị jụụ na nkụ.
OEAcan nwere ike inyere gị aka n'ọtụtụ ụzọ! N'ihi nke a, na-anabata onye ọ bụla nke ukwuu n'ihi na ọ nweghị mmetụta ọ bụla. O nwedịrị ike ime ka ndụ gị sie ike n'ime ezinụlọ gị na-eme ka unu niile too ma na-enwu gbaa n'ọdịdị, n'ụdị, na nkwanye ugwu na ntụkwasị obi. Idobe ma na-edobe ahụ gị nke ọma, ọkachasị ndị buru ibu, agaghị eme ka ị nwee ọ happyụ kamakwa ọ ga - emekwa ka ndị ọzọ nwee ọ happyụ ma tookwa gị anya.
OEA ga - enyere gị aka ịhapụ nrụgide uche na - enyere gị aka ịme echiche dị mma n'uche ndị ọzọ. Ya mere, kama iwe iwe na enweghị obi ụtọ, oge eruola ka ịme ihe ma bido iji OEA ma ọ ga-eju gị anya nke ukwuu ịhụ ike anwansi ya, ị ga-enwe ahụ ike na mmetụ aka.
Ọrụ Oleoylethanolamide (oea)
OEA ma ọ bụ Oleoylethanolamide bụ ọgwụ na-enyere gị aka ịhazi oke, usoro iri nri, na kọleji. Ọ bụ ihe na-edozi ahụ. Ọ na - edozi abụba nke ahụ gị site na ịba ụba metabolism nke abụba dị na ahụ gị. Ọ na-arụ ọrụ n'ụzọ na-atọ ụtọ.
Dịka na mgbe ị na-eri nri, ọgwụ a ga-eziga mgbaàmà na ụbụrụ gị na-arịọ gị ka ị kwụsị iri nri ma ọ bụ buru nri ọ bụla ọzọ dịka ahụ gị ewerela nri zuru ezu ma chọkwaghị ọzọ. Si otú, ị ga-amalite na-eche na ị na-ju ma ya mere na ị na-akwụsị na-eri. Yabụ, jiri nwayọ nwayọ na-eri obere nri oge ọ bụla. Ya mere, n'ikpeazụ, ị nwere ike belata ibu na oke.
Elele nke Oleoylethanolamide (OEA)
1.Nbelata ogo ghrelin
Ghrelin bụ mmiri ọgwụ dị na ahụ anyị nke na-akpali agụụ anyị. Achọpụtala na OEA na-enyere aka belata ogo hormone a n’ahụ anyị ma ọ bụrụ na a na-enye OEA a.
2.Na-ebelata abụba anụ ahụ na ọnụọgụ na-arịwanye elu
Ntụtụ a hụrụ na ọ dị oke irè n'ibelata abụba nke ahụ yana yana ọnụego na-aba ụba. Ọ na - eme ka mmetụta metabolism nke mitochondria dịkwuo elu. Ọ na-ebelata iri nri n'ụzọ dị irè ma na-emekwa ka ogo ahụ gị dị elu.
3.Na-edowe peptide yy larịị dị ala
Peptide YY bụ mmiri ọgwụ nke na-akpali agụụ anyị. OEA injections ma ọ bụrụ na ewere ya ga-enyere aka belata ma debe ogo nke Peptide YY hormone dị ala.
4.Helps iji chịkwaa agụụ
Injection injectionụ ọgwụ OEA ga - enyere aka ịchịkwa agụụ site na ịme ka ohere abụba dị na ahụ anyị belata. Ọbụna ọ na - eme ka abụba abụba n’ahụ anyị dịkwuo mma. Dịka na mgbe ị na-eri nri, OEA amalite ịrụ ọrụ. Ọ na-ewelite ọkwa arụmọrụ ya ma n'otu oge ahụ na-ebelata ogo agụụ gị site n'iziga akara na ụbụrụ ma gwa gị na afọ juru gị nke ukwuu na ịchọghị nri ọzọ ị ga-eri.
5.Ọ dịghị mmetụta ọ bụla
Mgbe emechara nyocha OEA, egosiputala na ọ nweghị onye nwere nsogbu ọ bụla dị njọ mgbe enyechara ya n'ime ahụ. OEA bụ acid oleic na-ewere dị ka akụkụ nke nri gị siri ike na nke na-edozi ahụ.
6.Positive utịp ke nchegbu
OEA na-emetụta nchegbu. Nri nke OEA na-enyere aka ime ka uche gi ghara inwe nchekasị ma si otú a na-enye aka n'ichebe ọrịa ndị na-akpata nchegbu nchegbu.
7.Nyekwuo hdl n'ime ahu
E nwere cholesterol abụọ dị na ahụ anyị. Ha bụ- LDL Cholesterol na HDL Cholesterol. LDL bu cholesterol ọjọọ na HDL bụ ezigbo cholesterol. Inye OEA na-enyere aka belata LDL Cholesterol ma mee ka HDL Cholesterol dịkwuo elu.
8.Aids na-ewu ụlọ ahu
Iwuli aru gi nke oma ma dozie ya nke oma bu uzo kachasi nma n'ime uwa ta. Karịsịa na ụlọ ọrụ ejiji ma ọ bụ ụlọ ọrụ ntụrụndụ na-edozi ahụ dị oke mkpa. Iri OEA na-enyekwa aka n’ime ka ahụ dị ike ka ọ na-ebelata abụba dị gị n’ahụ.
Ihe akụrụngwa nke Oleoylethanolamide (OEA)
Otu nwere ike ịzụta ọgwụ OEA site na ụlọ ahịa ọgwụ na-ewu ewu na nke maara nke ọma dị nso ebe obibi gị ma ọ bụ nwedịrị ike ịzụta ya site na ịtụ ahịa n'ịntanetị. Mana mmadu aghaghi inwe nlezianya na nke a dika ndi nile n'enye ogwu a nwere ike ha abughi ezi.
Yabụ, lelee aha ọma na proficienti nke ụlọ ahịa ọgwụ n'ịntanetị na maka nke ahụ, ọ na-adị mma mgbe niile ịgafe nkọwa nke nyocha nke ndị zụrụ ahụmahụ. Jide n'aka na nkwakọ ngwaahịa nke ngwaahịa dị ka ma ọ bụ akara ya nke ọma ka ọ bụghị iji zere ụdị mmetọ ọ bụla nke nwere ike ibute ụfọdụ nsogbu dị egwu na ahụ ike.
Oleoylethanolamide (oea) n'ụdị ntụ ntụ
OEA adịghị n'ụdị ya n'ụdị mbadamba ma ọ bụ capsules. Otú ọ dị, ị nwere ike zụta OEA ntụ ntụ na nnukwun'ahịa ma ọ bụrụ na achọrọ. A na-etinye ụdị ntụ ntụ a na ngwụcha ngwaahịa site na idozigharị ya na 15% OEA ma ọ bụ 50% OEA oleic acid. Edere ụkpụrụ nke Cima OEA n'etiti 90% na 95% ọkachasị n'etiti ndị zụtara Europe na United States.
Co-guzobere, onye isi ụlọ ọrụ na-edu ndú; PhD natara na Fudan University na organic onwu. Ihe karịrị afọ itoolu nke ahụmịhe na kemịkal na kemịkalụ ọgwụ; ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ akwụkwọ nyocha 10 nke ebipụtara na akwụkwọ akụkọ ikikere, yana ihe karịrị akwụkwọ ikike ise nke China.
(1).Pi-Sunyer FX, Aronne LJ, Heshmati HM, Devin J, Rosenstock J. Ihe Ga-eme Mmetụta nke rimonabant, onye na-egbochi Cannabinoid-1, na-ebute ọrịa na ọrịa cardiometabolic na ndị ọrịa buru ibu ma ọ bụ buru ibu: RIO-North America: ikpe a na-achịkwa n'ọchịchị. Akwụkwọ akụkọ nke American Medical Association. 2006; 295 (7): 761-775.
(2).Giuseppe Astarita; Bryan C. Rourke; Johnnie B. Andersen; Jin Fu; Janet H. Kim; Albert F. Bennett; James W. Hicks & Daniele Piomelli (2005-12-22). "Ọganihu nke posto nke oleoylethanolamine nchịkọta na obere eriri afọ nke eke Burmese (Python molurus)". Am J Physiol Regul Njikọ Ngwakọta Ahụ. 290 (5): R1407 – R1412.
(3) .Sarro-Ramirez A, Sanchez-Lopez D, Tejeda-Padron A, Frias C, Zaldivar-Rae J, Murillo-Rodriguez E. inbụrụ ụbụrụ na agụụ: ikpe nke oleoylethanolamide. Ndị na-ahụ maka sistemụ na-agwọ ọrịa na Chemistry. 2013; 13 (1): 88–91.
(4).Njem inyocha egt
(5).Anandamide vs cbd: kedu nke ka mma maka ahụike gị? Ihe niile ị chọrọ ịma banyere ha!
(6).Ihe niile ịchọrọ ịma gbasara nicotinamide riboside chloride.
(7).Mmeju nke Magnesium l-threonate: uru, onunu ogwu, na ihe ndi ozo.
(8).Palmitoylethanolamide (agwa): uru, onunu ogwu, ojiji, mgbakwunye.
(9).Top 6 uru uru nke resveratrol Mmeju.
(10).Ihe 5 kacha elu na-ewere phosphatidylserine (ps).
(11).Top 5 uru nke ị pụ pyrroloquinoline quinone (pqq).
(12).Ihe kacha mma nootropic nke alpha gpc.
(13).Ngwunye kachasị mma nke ịka nká nke nicotinamide mononucleotide (nmn).
Nnyocha e mere na nso nso a gosipụtara na OEA bụ onye na-emegide TRVP1. Egosiputala na OEA nwere mmetụta bara uru na ahụ ike site na ịmalite ịchịkwa nri nri, lipid beta-oxidation, oke ahụ na ahụ mgbu. Nchọpụta nke usoro ọrụ gosipụtara na OEA na-arụ ọrụ PPAR-alpha ma na-akpali akwara vagal site na capsaicin receptor TRPV1. Ihe omumu omumu nke mbu gosiputara na OEA ka na aru oru mgbe eji ogwu onu.
Na nso nso a, m na-eji OEA (oleoylethanolamide) ọzọ nke bụ agonist PPARa ọzọ, mana nke bụ ihe na-akpata satiety. Iji ya eri nri ma felata n'ihi na ọ nwere obere abụba na-ere ọkụ na ọmarịcha agụụ na-adịghị mkpa. Ọ dị mwute na ọ bụ otu ma ọ bụ nhọrọ ọzọ maka mmetụta bara uru.
Mbido Gbasara anyị blog Ndi ana-akpo ngwaahịa